ဆော့ဖ်ဝဲလ် - ဆော့ဖ်ဝဲလ်လိုင်စင်, ကွန်ပျူတာ ဆော့ဖ်ဝဲရ်, အဂျို
အဂျိုင်း(လ်) နည်းဖြင့် ဆော့ဖ်ဝဲရ် ဖန်တီးခြင်း
အကြောင်းအရာ ထိန်းချုပ်ရေး ဆော့ဖ်ဝဲလ်
ⓘ ဆော့ဖ်ဝဲလ် - ဆော့ဖ်ဝဲလ်လိုင်စင်, ကွန်ပျူတာ ဆော့ဖ်ဝဲရ်, အဂျိုင်း လ်, နည်းဖြင့် ဆော့ဖ်ဝဲရ် ဖန်တီးခြင်း, ဆော့ဖ်ဝဲ ဖွံ့ဖြိုးရေး, မောလ်ဝဲလ်, ဆော့ဖ်ဝဲဗားရှင်း, PhpED ..
အသုံးချ ဆော့ဖ်ဝဲလ်များ ဆော့ဖ်ဝဲ ဆောင်းပါးတိုများ ဆော့ဖ်ဝဲလ် နှိုင်းယှဉ်မှုများ နှစ်အလိုက် ဆော့ဖ်ဝဲလ်များ ဆော့ဖ်ဝဲ လိုဂိုများ လိုင်စင်အလိုက် ဆော့ဝဲလ် ဝဘ် ဆော့ဖ်ဝဲလ်
ဆော့ဖ်ဝဲလိုင်စင် ဆိုသည်မှာဆော့ဖ်ဝဲအားအသုံးပြုခြင်း ပြန်လည်ဝေငှခြင်းတို့ကိုထိန်းချုပ်သောဥပဒေရေးရာကိရိယာတစ်ခုပုံနှိပ်ထားသောစာရွက်စာတမ်းများဖြင့်ဖြစ်စေ၊ မပါဘဲဖြစ်စေ စာချုပ်ပါဥပဒေအရဖြစ်သည်။ ယူနိုက်တက်စတိတ်မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေအရဆော့ဖ်ဝဲလ်အားလုံးသည်မူရင်းကုဒ်နှင့်အရာဝတ္ထုကုဒ်နှစ်ခုလုံးတွင်မူပိုင်ခွင့်ကိုကာကွယ်ထားသည်။ ထိုဆော့ဖ်ဝဲကိုအမေရိကန်အစိုးရမှတီထွင်သူ မဟုတ်လျှင်၎င်းတွင်မူပိုင်ခွင့်မရနိုင်ပါ။ မူပိုင်ခွင့်ရထားသည့်ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူများသည်သူတို့၏ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုအများဆိုင်သို့လှူဒါန်းနိုင်သည်။ ပုံမှန်ဆော့ဖ်ဝဲလိုင်စင်လိုင်စင်ရသူအားပုံမှန်အားဖြင့်အသုံးပြုသူအားခွင့်ပြုချက်ပေးပြီးဆော့ဖ်ဝဲမိတ္တူတစ်ခု တစ်ခုထက် ...
ကွန်ပျူတာ ဆော့ဝဲရ် သည် ကွန်ပျူတာစံနစ်အပေါ်တွင် အလုပ်တစ်ခုကို ပြုလုပ်စေနိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သောပရိုဂရမ်နှင့် ခိုင်းစေချက်အစီအစဉ်တို့ကို စုစည်းထားသော ပရိုဂရမ် အစုအဝေးများကို ခေါ်ဆိုပါသည်။ ကွန်ပျုတာဖြင့် ညွှန်ကြားချက်များ၊ လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်သော စနစ်အတွက် အသုံးပြုသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် သတင်းအချက်အလက်များအား ကွန်ပျူတာဖြင့် ရေးနိုင်၊ ဖတ်နိုင်ပြီး ဒီဂျစ်တယ် နည်းပညာဖြင့် သိမ်းဆည်းခြင်းကို ခေါ်﻿ဝေါ်ခြင်း အတွက် အသုံးပြုသည်။ ၎င်းအပြင် ၁၉၈၀ ဝန်းကျင်ခန့်က ကွန်ပျုတာ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမာထည်များနှင့် ကွဲပြားစေရန် အတွက် အသုံးပြုခဲ့သည်။ ယခင်က ဆော့ဝဲကို မီဒီယာလုပ်ငန်းသုံး ဓာတ်ပြား၊ မက္ကနစ်တစ် တိပ်ခွေမျာ ...
အဂျိုင်း နည်းဖြင့် ဆော့ဖ်ဝဲရ် ဖန်တီးခြင်း ဆိုသည်မှာ ဆော့ဖ်ဝဲရ် တစ်ခုကို ဖန်တီးရာတွင် ချဉ်းကပ် အဖြေရှာပုံ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုနည်းလမ်းတွင် ကိုယ်တိုင် ခေါင်းဆောင်တာဝန်ယူနိုင်၍ ဆော့ဖ်ဝဲရ်ကဏ္ဍစုံတွင် ကျွမ်းကျင်သူများပါဝင်သည့် အဖွဲ့များ နှင့် ဆော့ဖ်ဝဲရ်ကို အသုံးပြုမည့်သူများ အတူတကွ ညှိနှိုင်း အားထုတ်လုပ်ဆောင်၍ ဆော့ဖ်ဝဲရ် အတွက် လိုအပ်ချက်များ နှင့် ဆော့ဖ်ဝဲရ်အဖြေများကို အဆင့်ဆင့် ဖော်ထုတ် ရယူသည်။အဂျိုင်း နည်းတွင် ပြောင်းလဲရန် လွယ်ကူသောစီစဉ်မှု၊ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲ ဖန်တီးခြင်း၊ ဆော့ဖ်ဝဲရ် တစ်ခုကို စောစီးစွာ ပေးအပ်ခြင်း နှင့် အစဉ်မပြတ် တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ခြင်းများကို အလေးထား၊ ဦးစားပေ ...
ဆော့ဖ်ဝဲ ဖွံ့ဖြိုးမှု ဆိုသည်မှာ ဆော့ဖ်ဝဲ ထုပ်လုပ်ခြင်း၊ရေးသားခြင်းများဖွံ့ဖြိုးစေရေးဆောင်ရွက်ခြင်းကို ခေါ်ဆိုသည်။ဆော့ဖ်ဝဲ ဖွံ့ဖြိုးမှု ကို ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ်းမင်း တွင် ရင်းမြစ်ကုဒ်များ ရေးသားခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်များကို ရည်ညွှန်းသည်။ ထို့ပြင် ဆော့ဖ်ဝဲ ဖွံ့ဖြိုးမှုတွင် သုတေသနပြုခြင်း၊အသစ်အသစ်များ တိုးတက်စေခြင်း၊ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း၊ ပြုပြင်မွန်းမံခြင်း၊ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် အခြားအချက်များစွာပါဝင်သည်။ဆော့ဖ်ဝဲများ ဖွံ့ဖြိုးရန် ရည်ရွယ်ချက်မျိုးစုံရှိနိုင်သော်လည်း အဓိကအချက် ရပ်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ အဓိကလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်စည်းရန်၊အလားအလာကောင်းသော လေ့လာနေဆဲ အသုံးပြုသူများ ...
အကြောင်းအရာ ထိန်းချုပ်ရေး ဆော့ဖ်ဝဲလ် သည် နိုင်ငံရေး၊ ညစ်ညမ်းစာပေ စသည့် အကြောင်းအရာများ အထူးသဖြင့် အင်တာနက်ပေါ်ရှိ ဤကဲ့သို့သော အကြောင်းအရာများအား စာဖတ်သူများ ဖတ်ရှုခွင့်ရှိမရှိ ထိန်းချုပ်ပေးသည့် ဆော့ဖ်ဝဲလ် တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့သော ကန့်သတ်မှုများသည် အဆင့်အလိုက် ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဥပမာ - အစိုးရက နိုင်ငံနှင့်အဝန်း သော်လည်းကောင်း၊ အလုပ်ရှင်က ဝန်ထမ်းများအား လည်းကောင်း၊ စာသင်ကျောင်းများတွင် ကျောင်းသားများအား လည်းကောင်း၊ မိဘများက သားသမီးများအား လည်းကောင်း ကန့်သတ်နိုင်သည်။ ကူဘားနိုင်ငံတွင် အစိုးရက ထိန်းချုပ်ထားသည့် အင်တာနက် ကဖေး၌ ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုသူက စာလုံးအချို့ကို နှိပ်မိပါက word processor သို ...
မောလ်ဝဲလ် ဆိုသည်မှာ Malicious Software ၏အတိုကောက် စာလုံးဖြစ်သည်။ Malwareသည် ကွန်ပျူတာစနစ်ကို တစ်နည်းနည်းဖြင့် ဖျက်ဆီးရန် ကြံရွယ်ထားသည့် ပရိုဂရမ်များဖြစ်သည်။ ကွန်ပျူတာ သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းလုပ်ငန်းဆောင်တာများ နှောက်ယှက်ရန်၊ သတင်းအချက်အလက်များ ရယူစုဆောင်းရန်၊ ပုဂ္ဂလိကကွန်ပျူတာစနစ်အား အသုံးပြုခွင့်ရရှိရန်၊ သို့မဟုတ် မလိုလားသော ကြော်ငြာများ ဖော်ပြရန်တို့အတွက်တွင် အသုံးပြုသည့် မည်သည့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်မဆို မောလ်ဝဲလ်ဟု ခေါ်ဆိုသည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် မောလ်ဝဲလ် ဟူသောဝေါဟာရကို Yisrael Radai က စတင်သုံးစွဲခဲ့ခြင်းမပြုမီ အန္တရာယ်ရှိသော ဆော့ဖ်ဝဲလ်များအား ကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်စ်အဖြစ် ရည်ညွှန်းခဲ့သည်။
ဆော့ဝဲလ် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းကို ဗားရှင်းသတ်မှတ်ခြင်း ပုံစံ သည် ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲလ်များ၏ ယခင်အခြေအနေနှင့် မတူညီဘဲ သီးသန့်ဖြစ်သည့် အခြေအနေအသစ်တစ်ရပ်ကို ရည်ညွှန်း၍ ထို ကွန်ပျူတာ ဆော့ဖ်ဝဲသို့ မတူညီဘဲ သီးသန့်ဖြစ်သော ဗားရှင်းအမည်များ ဗားရှင်းနံပါတ်များ ကို သတ်မှတ်ပေးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ပေးထားသော ဗားရှင်းနံပါတ်အမျိုးအစား အတွင်းတွင် ဤနံပါတ်များကို ပုံမှန်အားဖြင့် တိုးမြှင့်သွားရန် သတ်မှတ်ချက်ရှိပြီး ဆော့ဝဲလ်၏ တိုးတက်မှုအသစ်များနှင့်အညီ ဆက်လက် သတ်မှတ်သွားရန် ဖြစ်သည်။ အသေးစိတ် အချက်အလက်များအရ တည်းဖြတ်မူထိန်းချုပ်မှု များသောအားဖြင့်မတူညီသောအချက်အလက်များ၏ဗားရှင်းများကိုဤအချက်အလက်သည်ကွန်ပျူတာဆော့ ...
ဆော့ဖ်ဝဲ အာတဖက် ဆိုသည်မှာ ဆော့ဖ်ဝဲတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ခုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများမှ ထုတ်လုပ်လိုက်သော ဆော့ဖ်ဝဲတည်ဆောက်ခြင်းဆိုင်ရာတွင် အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းများနှင့်တစ်ကွ အကျိုးဆက်ထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ ကို ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့် ဆော့စ်ကုဒ် ၊ ၎င်းကို ဖန်တီးရာတွင် အထောက်အကူပြုသော အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ၎င်းမှ ထုတ်လုပ်လိုက်သော ပရိုဂရမ်များ ၊ လိုင်ဘရီများ ၊ ပက်ကေ့ချ်များစသည်တို့ကို ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
ကွန်ပျူတာနှင့် သက်ဆိုင်သော အသုံးအနှုန်းတွင် ကာနဲလ် ဆိုသည်မှာ ကွန်ပျူတာ စက်လည်ပတ်ရေး စနစ် အတော်များများ၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်းပင် ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဟတ်ဒ်ဝဲလ် အဆင့်တွင် လုပ်ဆောင်သော ဒေတာ ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းမှုများ နှင့် အသုံးချဆော့ဖ်ဝဲလ် တို့ကြားတွင် ပေါင်းကူးသဖွယ် ဆက်သွယ်ပေးသည်။ ကာနဲလ်၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင် စနစ်၏ အရင်းအမြစ် များကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း လည်း ပါဝင်သည်။ ကွန်ပျူတာ စက်လည်ပတ်ရေး စနစ်များ၏ အခြေခံ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သည့် အတွက် ကာနဲလ်သည် ရင်းမြစ်များ အတွက် အောက်ခြေ အကျဆုံး စိတ်ကူးပုံဖော်နိုင်သည့် အလွှာ အဖြစ် ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။
Embedded system သည် special purpose computer system deisgned ကိုအသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်သည်။ သူကတော့ general-purpose computer နဲ့ မတူပါဘူး။ သူက လိုအပ်တဲ့ hardware, mechanical parts တွေကို ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ အဲဒါတွေကို general-purpose computer တွေမှာ ရှာလို့မရပါဘူး။ Design engineers တွေက size နဲ့ cost သက်သာအောင် လုပ်ဆောင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူက စီးပွားရေးအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးထုတ်လုပ်တာပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် embedded system ကို digital နာရီများ, mp3 mp4 player စတာတွေမှာ အသုံးပြုကြပါတယ်။ ကြီးမားတဲ့ system တွေဖြစ်တဲ့ မီးပွိုင့်များ ၊ nuclear power plants system controlling တွေမှာလည်းအသုံးပြုကြပါတယ်။
LibreOffice သည်အခမဲ့လွတ်လပ် ရုံးသုံးဆော့ဖ်ဝဲ ဖြစ်သည်။ Document Foundation ၏ စီမံကိန်း တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် OpenOffice.org မှ ခွဲထွက်ခဲ့သည်။ ယခင်က StarOffice ၏ open-source ဗားရှင်းဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခု ဖြစ်သည်။ LibreOffice တွင် စာရွက်စာတမ်း ပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ၊ စာရင်းဇယားများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ slideshow များပြုလုပ်ခြင်း၊ ပုံများရေးဆွဲခြင်း၊ ဒေတာဘေ့ များနှင့် အလုပ်လုပ်ခြင်း၊ သင်္ချာပုံသေနည်းများဖြင့် တွက်ချက်ခြင်း စသည်တို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ LibreOffice ကို ဘာသာစကား ၁၁၀ ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည်။ LibreOffice သည် နိုင်ငံတကာ ISO/IEC စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် ODF ဖိုင်အမျိုးအစားကို အသုံး ...
Notepad++ သည် text editor ဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်သည်။ မိုက်ခရိုဆော့ဖ် ဝင်းဒိုးတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ တဘ် အသစ်များဖြင့် တည်းဖြတ်ခြင်း၊ ဖိုင်းများစွာကို မျက်နှာပြင်တစ်ခုတည်းတွင် တည်းဖြတ်နိုင်ခြင်း စသည်တို့ကို ထောက်ပံ့ထားသည်။ ၎င်းပရောဂျက်၏ အမည်မှာ C increment operator မှ ဆင်းသက်လာသည်။ Notepad++ ကို အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲအဖြစ် ဖြန့်ဝေထားသည်။ ပထမဆုံး ပရောဂျက်ကို SourceForge.net တွင် လွှင့်တင်ခဲ့ပြီး ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ရယူသည့် အရေအတွက်မှာ ၂၈ သန်းကျော် ရှိခဲ့သည်။ SourceForge Community Award ၏ အကောင်းဆုံး တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာ ဆော့ဖ်ဝဲဆုကို နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် ရရှိခဲ့သည်။ ပရောဂျက်ကို TuxFamily fr တွင် ၂၀၁၀ ခုနှစ် မှ ၂ ...
Snipping Tool သည် ဝင်းဒိုး Vista နှင့် နောက်ပိုင်းထွက် ဝင်းဒိုးစနစ်များတွင်ပါဝင်လာသော ကွန်ပျူတာ မျက်နှာပြင်ကို ပုံဖမ်းယူသည့် ဆော့ဖ်ဝဲ ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဖွင့်ထားသော window ၊ ထောင့်မှန်စတုဂံ ပုံစံ၊ စိတ်ကြိုက်ပုံစံ၊ အလိုရှိသော မျက်နှာပြင် အစရှိသဖြင့် လိုအပ်သလို ပုံဖမ်းယူနိုင်သည်။ ပုံများကို ရုပ်ပုံဖိုင်များဖြစ်သည့် သို့မဟုတ် MHTML ဖိုင်များ အနေဖြင့် သိမ်းနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ဖမ်းယူထားသော ပုံများကို ပြုပြင်နိုင်သည်။ အရောင်မျိုးစုံပါသော ခဲတံများ၊ ခဲဖျက်များ နှင့် ရောင်စုံမင်တံများဖြင့် ရုပ်ပုံကို အလှဆင် ပြုပြင်နိုင်သည်။ ဝင်းဒိုး Vista မတိုင်ခင်က Snipping Tool သည် Windows XP Tablet PC Edition 2005 တ ...
StarUML သည် UML ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခု ဖြစ်သည်။ MKLab မှ ထုတ်လုပ်ထားသည်။ StarUML ကို GNU GPL လိုင်စင်အောက်တွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မတိုင်ခင်အထိ ထုတ်လုပ်ထားသည်။ ဗားရှင်း ၂.၀.၀ ကို proprietary license အောက်တွင် စမ်းသပ်ဆော့ဖ်ဝဲ အနေဖြင့် ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ StarUML သည် UML 2.0 ပုံများကို အများဆုံး ထောက်ပံ့ပေးထားသည်။ ၎င်းသည် ပုံတွင် timing နှင့် interaction တို့ မပါရှိပေ။
Sublime Text သည် Python ပရိုဂရမ်းမင်းနည်းပညာအသွင်အပြင်ဖြင့် ရေးသားထားသော ကုဒ်တည်းဖြတ်ဆော့ဖ်ဝဲ ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာ များစွာကိုရေးသားနိုင်အောင် အထောက်အပံ့ပေးထားသည်။ ထို့ပြင် အသုံးပြုသူမှ plugins များထည့်သွင်း၍ အသုံပြုနိုင်သည်။ အခမဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလိုင်စင်အောက်တွင် ၎င်းကို ပြုပြင်နိုင်သေးသည်။
Viber သည် cross-platform voice over IP နှင့် မက်ဆေ့ပို့သည့် ဆော့ဝဲအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ရခုတန်း ကုမ္ပဏီက ထုတ်လုပ်သည်။ ဆော့ဝဲအား ဖရီးဝဲလ်အနေဖြင့် အန်းဒရွိုက်၊ iOS, Linux, macOS နှင့် ဝင်းဒိုးတို့တွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ Viber ကို အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်း ပြုလုပ်ရသည်။ သို့သော်လည်း Desktop ပလက်ဖောင်းတွင်မူ မိုဘိုင်းဆက်သွယ်မှုမလိုအပ်ဘဲ ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူအသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့အပြင် Viber သည် နိုင်ငံတကာသို့ အခပေး ကြိုးဖုန်းလိုင်း နှင့် မိုဘိုင်းဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခု ဖြစ်သည့် Viber Out ဝန်ဆောင်မှုကိုလည်း အထောက်အပံ့ ပ ...
Wubi ဆိုတာကတော့ Ubuntu အတွက် Windows-base Free software installer ဖြစ်ပြီး GPL licensed အောက်မှာ ထားရှိပါတယ်။ Wubi ဟာ 7.04 နှင့် 7.10 မှ စတင်ပေါက်ဖွားလာပြီ ထုတ်ဝေခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ သို့သော်လည်းပဲ 8.04 မှာပါဝင်လာခဲ့ပြီး 8.04 alpha5 ကတည်းက ပေါင်းထည့်ထားခဲ့ပါတယ်။ Wubi ဟာ Ubuntu Live CD ထဲမှာလည်း တွေ့နိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး Ubuntu 7.10 Gusty Gibbon ထုတ်ဝေမှုအသစ်တွေမှာလည်း တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ Windows user တွေအနေနဲ့ Ubuntu Linux အမျိုးအစားကို လွယ်လွယ်ကူကူ သုံးစွဲစေချင်ပြီး Disk formatting လုပ်ရတာ ဒါမှမဟုတ် Disk partitioning ခွဲရတာတွေကို သက်သာစေချင်လို့ပါ။ Wubi ဟာ Windows ရဲ့ Ad ...
YaST သည် လင်းနပ်စ်စက်လည်ပတ်မှုစနစ် ၏ အသွင်အပြင်ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခု ဖြစ်သည်။ YaST သည် လင်းနပ်၏ အခွဲတစ်ခု ဖြစ်သော openSUSE တွင် ပါဝင်သည်။ ထို့အတူ openSUSE တွင်လည်း စီးပွားရေးအရ ထုတ်လုပ်ထားသော အခွဲများ ရှိသည်။ ၎င်းသည် defunct United Linux ၏ အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ YaST သည် အသွင်အပြင်များစွာကို ပြုပြင်နိုင်သည့် ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် YaST သည် SuSE ၏ ပထမ ထုတ်လုပ်မှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ YaST ကို ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် ရေးသားခဲ့သည်။ ပထမ SuSE Linux 6.3 တွင် သွင်းရန်ဆော့ဖ်ဝဲ installer - only တစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့သည်။ YaST2 ကို SuSE Linux 6.4 တွင် ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
ဂစ်တ် သည် ဆော့ဖ်ဝဲ တည်ဆောက်စဉ်အတွင်း ရင်းမြစ်ကုဒ်ပြောင်းလဲမှုများကို ခြေရာခံရန် ဖြန့်ဝေထားသော ဗားရှင်းထိန်းချုပ်စနစ် ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုပရိုဂရမ်မာများအကြား ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော်လည်း မည်သည့်ဖိုင်အစု၌မဆိုပြောင်းလဲမှုများကို ခြေရာခံရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်း၏ရည်မှန်းချက်များမှာ မြန်နှုန်း၊ အချက်အလက် မှန်ကန်စွာတည်မြဲမှု၊ အချက်အလက်ပြည့်စုံမှု၊ ဖြန့်ဝေထားသော သမရိုးကျ တစ်ဖြောင့်တည်းမဟုတ်သော လုပ်ငန်းအသွားအလာများအတွက်အထောက်အပံ့ ပါဝင်သည်။ Git ကို လီနပ်စ် တောဗောလ်Linus Torvaldsမှ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် လင်းနပ်စ်ကာနယ် ကိုဖွံ့ဖြိုးစေရန်အတွက်ဖန်တီးခဲ့သည်။ အခြား ကာနယ်ကုဒ် ရေးသားသူများက ၎င်း၏ ...
အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲလ် ဆိုသည်မှာ ဆော့ဝဲတီထွင်သူများက အခမဲ့ပေးသုံးထားသော ကွန်ပျူတာ ဆော့ဝဲလ်များဖြစ်သည်။ အခမဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်များကို မည်သူမဆို ပြင်ဆင်၊ မျှဝေနိုင်သည်။
TheDraw – ANSI/ASCII text editor with built-in editor and manager of ASCII fonts. FIGlet – For creating ASCII art text.
ပိုင်ဆိုင်သူ ရေးသားသူမှ မူပိုင်ခွင့်ရှိထားပြီး ဖြစ်သော်လည်း ၎င်း၏ဆန္ဒအရ အခမဲ့သုံး နိုင်သော ဆော့ဖ်ဝဲများဖြစ်သည်။ သို့သော် အသုံးပြုသူမှ နှစ်သက်လျှင် တန်ဖိုးပေးချေရမည် ဖြစ်ပြီး တန်ဖိုးမများလှပါ။ ထိုသို့တန်ဖိုး ပေးချေမှသာ ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်လက်သုံးစွဲ နိုင်သည့် ဆော့ဖ်ဝဲများဖြစ်သည်။
Key Magic သည် သန့်သက်ခင်ဇော် ရေးသားခဲ့သော ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် မြန်မာစာရေးသွင်းမှု့ အထောက်အကူပြု ကီးဘုတ် ​ပရိုဂရမ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ OpenSource ပရောဂျက် တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် မြန်မာစာ အတွက်သာမက အခြားဘာသာစကားများအတွက်ပါ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်လိပ်စာမှာ ဖြစ်သည်။
တစ်ဘ်ကို ရန်းဒေးဗူး သည် အင်တာပရိုက်စ် ဆော့ဖ်ဝဲလ်များ အချင်းချင်း ပေါင်းစည်းဆက်စပ်ရာတွင် အသုံးပြုသော ဆော့ဖ်ဝဲလ် တစ်ခု ဖြစ်သည်။ တစ်ဘ်ကိုသည် C++ ၊JAVA၊Visual Basic ၊.NET အစရှိသော ပရိုဂရမ်းမင်း ဘာသာစကား အမျိုးမျိုးဖြင့် ရေးသားထားသော ဆော့ဖ်ဝဲလ်များ အချင်းချင်း ဆက်သွယ်ရာတွင် လွယ်ကူမြန်ဆန်စေရန် အတွက် မက်ဆေ့ ဖလှယ်သော API များကို ပံ့ပိုး ပေးလေ့ ရှိသည်။
အဂျိုင်း(လ်) နည်းဖြင့် ဆော့ဖ်ဝဲရ် ဖန် ..